कति सल्लाह दिन नाइयों - TipWho
घर / नाई, नाई, हेयर ड्रायर, उत्तर अमेरिका, क्षेत्र, सेवा, टिप क्यालकुलेटरहरू, संयुक्त राज्य अमेरिका / कत्ति धेरै सल्लाह दिन नाइयों
1 कत्ति धेरै सल्लाह दिन नाइयों
1.2 नाइहरूलाई कसरी भुक्तानी गरिन्छ?
1.3 के तपाईं टिप्स नाइयों?
1.4 कपालमा कपालको लागि कति सल्लाह दिने?
1.5 दाह्री ट्रिमको लागि कति टिप दिने?
1.6 म कसरी टिप छोड्नु पर्छ?
1.7 के म छुट्टीको मौसममा मेरो हजामलाई एउटा विशेष सल्लाह दिनुहुन्छ?
1.8 क्रिसमसमा नाईलाई कत्तिको सल्लाह दिने?
1.9 नाई टिप क्यालकुलेटर
के तपाइँसँग तपाइँको मनपर्ने छिमेकी नाईको कपाल काट्ने वा दाह्री ट्रिम पाउने समय भयो? यस लेखमा हामी हजाम सल्लाहको शिष्टाचार मार्फत जान्छौं ताकि तपाईं आफ्नो नाईलाई निर्धक्क भई सुझाव दिन सक्नुहुन्छ।
अमेरिकी सरकारको श्रम तथ्या of्क विभागका अनुसार संयुक्त राज्यमा २०,१20,130० वटा छन्। औसतमा, तिनीहरूले प्रति घण्टा १.15.97..26.91 earn कमाउँछन् जसमा सुझावहरू र आयोग समावेश हुन्छ। यो थोरै भ्रामक हुन सक्छ किनभने मजदुरहरू स्थानमा निर्भर गर्दछ। यदि तपाईंको नाई वाशिंगटन राज्यमा छ भने, औसत नाई ज्याला प्रति घण्टा २$..10१ छ तर अन्य राज्यहरूमा प्रति घण्टा १० डलरको नजिक छ। याद राख्नुहोस्, यी नम्बरहरूमा सुझावहरू र कमिशन समावेश छ, जसले तपाईंको हजामको आयको बहुमत बनाउन सक्छ।
नाइहरूलाई कसरी भुक्तानी गरिन्छ?
नाजुक या त कमिसनको आधारमा काम गर्छन् वा उनीहरूले नाईको पसलमा कुर्सी लिन्छन्।
यदि तपाइँको हजाम एक कमीशन आधारमा काम गर्दछ भने, तिनीहरूले तपाइँको बाल कटाईको लागतको एक अंश बाँकी नाई पसल मालिकसँगै राख्छन्। ठेठ कमिशन 70०% हजाम र 30०% मालिकको नाईको 40०% र मालिकमा 60०% हुन्छ। यो केवल निर्भर गर्दछ। यो संख्यामा राख्नको लागि, यदि तपाईंको हजामले तपाईंको कपाल काट्नको लागि $ १ charges शुल्क लगायो भने उनीहरू commission to देखि १०. .० डलर प्राप्त गर्नेछन्, उनीहरूको आयोगको व्यवस्था अनुसार। जबकि यो द्रुत कपाल काट्नेको लागि धेरै जस्तो लाग्न सक्छ, त्यहाँ समय पनि हुन्छ जब तिनीहरू पसलमा हुनु पर्छ तर ग्राहकहरू छैनन्। जब उनीहरूको हजाम कुर्सीमा कुनै ग्राहक हुँदैन, उनीहरूलाई भुक्तानी हुने छैन।
यदि तपाईंको हजामले नाईको पसलमा कुर्सी भाँडामा लिन्छ भने, तिनीहरूले मालिकलाई साप्ताहिक वा महिना भाडा शुल्क दिन्छन्। यसलाई 'बुथ भाडामा लिने' पनि भनिएको छ। जबकि यो स्थानमा निर्भर गर्दछ, एक जना नाईको लागि यो यसरी सम्भव छ कि उनले एक पटक एक वफादार ग्राहक बनाइसके पछि यस तरीकाले बढी पैसा कमाउन सकिन्छ। उसले ग्राहकहरू नभएसम्म, यद्यपि, यो जोखिमपूर्ण चाल हो कि उसले कमिसनमा काम गरेको भन्दा कम कमाई गरेको देख्न सक्छ।
के तपाईं टिप्स नाइयों?
संयुक्त राज्य अमेरिकामा नाउहरू लुकाउने परम्परागत र अपेक्षित हो। तपाईंले टिप दिनुपर्दैन, तर यसलाई साधारण शिष्टाचार मानिन्छ। यदि तपाईं टिप्स गर्नुहुन्न भने, यसको मतलब यो हो कि तपाईंले कपाल काटिएको खराब सोच्नुभयो वा तपाईंले खराब सेवा प्राप्त गर्नुभयो। यदि तपाइँ हरेक पटक तपाइँको कपाल काट्ने बित्तिकै नाईमा फिर्ता जानुहुन्छ भने, यदि तपाइँ टिप्स गर्नुहुन्न भने तपाइँको नाईसँग राम्रो सम्बन्धको अपेक्षा नगर्नुहोस्।
कपालमा कपालको लागि कति सल्लाह दिने?
कपालमा लाग्ने खर्चको १ of देखि २० प्रतिशतसम्म नाईहरूको लागि टिप्स हुन्छ। यसको मतलब $ १ ha बाल कटाई मा, तपाईंले राम्रो सेवा को लागी $ २.२। देखि $ 15.०० को एक टिप जोड्नु पर्छ। विगतमा, टिपिंग १०% थियो तर त्यो अब राम्रो टिप मानिदैन। समय र अपेक्षाहरू परिवर्तन भएको छ।
दाह्री ट्रिमको लागि कति टिप दिने?
एक कपाल संग एक दाह्री ट्रिम प्राप्त गर्दै? वा बस दाह्री ट्रिम? कुनै पनि केसमा, कुल बिलको १ to देखि २०% टिप गर्नुहोस्। केही फरक पर्दैन यदि तपाईंसँग केवल दाह्री ट्रिम छ र कुल बिल कम छ, तपाईंले कुल रकममा मात्र टिप गर्नुपर्छ। केहि साइटहरू नाइ द्वारा चालित थप टिपिंग सुझाव दिन्छ जब तपाईं केवल दाह्री ट्रिम पाउनुहुन्छ, तर त्यो आवश्यक वा अपेक्षित छैन।
म कसरी टिप छोड्नु पर्छ?
यदि क्रेडिट कार्डबाट भुक्तान गर्दै, तपाईं नगद रजिस्टरमा बिलमा सिधा सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं कपालमा नगदमा भुक्तानी गर्दै हुनुहुन्छ वा तपाईंको कार्डमा टिप छोड्न चाहनुहुन्न भने, नाईहरूले सँधै नगदी सुझावहरूको कदर गर्दछ।
के म छुट्टीको मौसममा मेरो हजामलाई एउटा विशेष सल्लाह दिनुहुन्छ?
हो, छुट्टी टिपिंग वास्तवमा नियमित नाई हुनेहरूका लागि एक चीज हो। तपाईंले क्रिसमसमा तपाईंको नाईलाई सल्लाह दिनुहुन्न, तर यसको मूल्यांकन गरिनेछ।
क्रिसमसमा नाईलाई कत्तिको सल्लाह दिने?
तपाईं १ बाल कटाउने लागतमा टिप गर्न सक्नुहुन्छ वा सानो उपहार खरीद गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै उपहार कार्ड।
हाम्रो आफ्नै बार्बर टिप क्यालकुलेटर जाँच गर्नुहोस्। यसले तपाईंको हजामलाई सरल बनाउँदछ।
नाईनाईको पसलनाई टिप क्यालकुलेटरनाईक्रिसमसकपाल काटकपाल कपालछुट्टी सीजनबिदाहरुटिप क्यालकुलेटरटिपिङसुझावसंयुक्त राज्य अमेरिका नाईनाईहेयर ड्रायरउत्तर अमेरिकाक्षेत्रसेवाटिप क्यालकुलेटरहरूसंयुक्त राज्य अमेरिका